Nwebisiinka Ntanetị | Okporo ụzọ ka Mgbakwunye
Ndị na-esonụ na-akọwa Nwebisiinka Nwepu na My okporo ụzọ blog website.
Dum ọdịnaya anyị okporo ụzọ blog website echebe iwu ihe ọgụgụ isi, tinyere iwu mba nwebisiinka na ụghalaahia. Onye nwe nwe nwebiisinka na / ma ọ bụ ụghalaahia bụ nke anyị website, na / ma ọ bụ ndị ọzọ nyere ikikere ma ọ bụ ihe ndị metụtara ya.
Nweghị ikikere nke edemede, akwụkwọ, e-akwụkwọ, akwụkwọ, post blọgụ, sọftụwia, ngwa, mgbakwunye, ngwa mgbakwunye, nka, eserese, eserese, foto, vidiyo, webinar, ndekọ ma ọ bụ ihe ndị ọzọ elere ma ọ bụ gere. site ma obu site n'aka My okporo ụzọ blog website ma ọ bụ site na ozi-e ma ọ bụ site n'ụzọ nke ọdịnaya echekwara na saịtị ndị otu. Ntinye data na weebụsaịtị anyị, dị ka blog comment, anaghị agbanwe eziokwu a ma ghara inye gị ikike ọ bụla na data ahụ. Nyefere ikike ọ bụla na ọdịnaya gị ozugbo ọ ghọrọ akụkụ nke weebụsaịtị anyị.
B NOTGH MOD MODB ,GH C, COPY, RUPUTA, WUPUTA, UPLOAD, POST, TRANSMIT, MA Ọ B D NA-EKPUTA, NA ANLỌ Ọ BYLA, AKW ONKWỌ AKW ,KWỌ, WELỌ, EGO, CODE NA / OR SOFTWARE. Ga ejigide ikike nwebisiinka niile na ọkwa ikikere ndị ọzọ dị na ihe izizi na akwụkwọ ọ bụla i mere. Gaghị ere ma ọ bụ gbanwee ihe ma ọ bụ mepụtaghachi, gosipụta, mee n'ihu ọha, kesaa, ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ iji ihe ahụ n'ụzọ ọ bụla maka nzube ọ bụla ma ọ bụ nke azụmahịa. Amachibidoro iji ihe akwụ ụgwọ na weebụsaịtị ọ bụla ma ọ bụ na gburugburu kọmputa netwọkụ maka nzube ọ bụla. Ọ bụrụ n ’imebi usoro ma ọ bụ ọnọdụ ọ bụla, ikikere gị iji ihe a gwụ na-akpaghị aka, ị ga-emerịrị akwụkwọ ọ bụla imepụtara n’ihe ahụ ozugbo.
E nyere gị ikike na-abụghị naanị, enweghị ike ibugharị, nweghachi ikike iji nke m okporo ụzọ Blog weebụsaịtị naanị maka nkeonwe, nke onwe, na-abụghị nke azụmahịa. Nwere ike ibipụta ma budata akụkụ ụfọdụ site na mpaghara dị iche iche nke weebụsaịtị naanị maka ojiji gị na-abụghị nke azụmahịa, ọ bụrụhaala na ị kwenyere ka ị ghara ịgbanwe ọdịnaya site na nke mbụ ya. Ọzọkwa, ị kwenyere na ị gaghị ehichapụ ma ọ bụ hichapụ ikike nwebisiinka ọ bụla ma ọ bụ nke nwere ikikere site na ihe ndị ị bipụtara ma ọ bụ budata na Blog okporo ụzọ m. Rịba ama na ọkwa ọ bụla na akụkụ ọ bụla nke weebụsaịtị anyị nke na-egbochi ibipụta & nbudata na-adapụta nkwupụta na njikwa niile.
Dị ka onye ọrụ na My Traffic Blog, ị kwenyere iji ngwaahịa na ọrụ awa site na webụsaịtị anyị n'ụzọ kwekọrọ na iwu na ụkpụrụ niile metụtara mpaghara, steeti na gọọmentị etiti. Enweghị ihe ọ bụla a ga-echekwa ma ọ bụ bufee nke na-emebi ma ọ bụ na-emebi ikike nke ndị ọzọ, nke bụ iwu na-akwadoghị, okwu rụrụ arụ, okwu rụrụ arụ, nke na-adịghị mma ma ọ bụ nke ọzọ, na-eyi egwu, na-ekwutọ mmadụ, ma ọ bụ na-emebi ikike nzuzo ma ọ bụ nke mgbasa ozi.
Ebe nrụọrụ weebụ anyị na-amachibido omume nke nwere ike ịbụ mmebi iwu, na-eweta ọrụ obodo ma ọ bụ na-emebi iwu ọ bụla. Ọ bụla ọrụ na ekwe ma ọ bụ inhibits ọ bụla ọzọ My Traffic Blog ọrụ site na iji ọrụ a machibidoro weebụsaịtị anyị iwu. Ewezuga nkwekọrịta edere ede, ị gaghị eziga ma ọ bụ zipu mgbasa ozi ma ọ bụ ịrịọ arịrịọ azụmahịa na weebụsaịtị anyị.
Gbanwee OGO: Dị ka ọ bụla nke ibe nchịkwa na nchịkwa iwu anyị, ọdịnaya nke ibe a nwere ike ịgbanwe na oge. N'ihi ya, peeji a nwere ike ịgụ dị iche iche maka nleta gị ọzọ. Mgbanwe ndị a dị mkpa, ma rụpụta ya site na My Traffic Blog, iji kpuchido gị na weebụsaịtị My Traffic Blog. Ọ bụrụ na ibe a dị gị mkpa, ị kwesịrị ị na-elele anya ugboro ugboro n'ihi na ọ nweghị ọkwa ọzọ nke ọdịnaya gbanwere ga-enye tupu ma ọ bụ mgbe mgbanwe gbanwere.